Tsaho toy ny ahoana ireo niely nandritra ny fifidianana filohampirenena 2020 natao tany Taiwan? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Febroary 2020 2:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Italiano, Español, Ελληνικά, 繁體中文
Summer Chen. Sary an'i Huang Hung Yu, nahazoana alàlana.
Nandritra ny fampielezankevitra nialoha ny fifidianana izay ho filohampirenena 2020, ny Janoary teo tao Tawian, tena nisy fiantraikany be tamin'ny fahafahan'ny vahoaka nanao safidy tamim-pahalalàna tsara rehefa nanatontosa ny fandatsahambato ny fampiasàna niely patrana an'ireo sehatra media sôsialy, toy ny Facebook sy ny LINE, mba hizaràna vaovao avy amin'ireo loharano tsy azo antoka. Vokany, nisy hetsika vitsivitsy teraka mba hiady amin'ny fanelezana vaovao diso tao Taiwan.
Ny Ivontoerana “Taiwan Fact-Check” no voalohany fikambanana fampitambaovao ao Taiwan nahazo fanamarinana avy amin'ny International Fact-Checking Network (IFCN), tambajotra erantany ivondronan'ireo fikambanana mpanamarina ny vaovao, manokan-tena ho amin'ny fampiroboroboana ny fomba fanao mendrika eny an-kianja.
Efa anjara toerana lehibe sahady no notànan'ilay ivontoerana tamin'ny fanoherana ireo fandisoambaovao nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2018 izay nampiarahana tamin'ny fanontaniana marobe nitsapàna ny hevitry ny vahoaka. Satria mikasika ny zon'ny LGBT (pelaka sns…) sy ny politikan'ny angovo ny sasantsasany tamin'ireo fanontaniana tamin'ny fitsapankevibahoaka, nampiasa ny fomba ratsy mandiso vaovao ireo vondrona politika sasany mba hanetsehana ny vahoaka hifidy ho azy ireo.
Ohatra, ireo vondrona manohitra ny LGBT dia nanely ny hevitra hoe mety hamely an-dry zareo sy ny fiainana maha-pelaka hafa amin'ny SIDA ny fiantraikan'ny zon'ny LGBT amin'ny fanabeazana ara-pananahana. Mandritra izany, ireo vondrona mpomba ny resaka angovo nokleary dia nanomboka fanentanana iray hanalàna baràka ireo mponina ao amin'ny Nosy Orkide izay nangirifiry nandritra ny taona maro noho ny fahalotoana avy amin'ny loto nokleary. Ireo vondrona mpomba ny Kuomintang (KMT) dia nampiasa tatitra tsy voamarina avy any amin'ny tanibe Shina mba hanakianana ireo manampahefana ao Taiwan ho tsy nahavita nanome fanohanana an'ireo mpizahatany ao Taiwan tao amin'ny seranampiaramanidina Kansai, tamin'ny fotoana namelezan'ny rivomahery Jebi tao amin'ny faritra tamin'ny 2018. Namono tena ny diplaomaty Taiwaney iray noho ny tantara iray noforomporonina niely be tety anaty tambajotra.
Mialoha ny fifidianana ho filohampirenena ao Taiwan ny taona 2020, Wang Liqiang, nitonona ny tenany ho Shinoa mpitsikilo, no namboraka tamin'ny mpilaza vaovao aostraliàna fa nanana andian-tafika mpikirakira vaovao manao fampielezankevitra ho an'i Han Kuo-yu, mpirotsaka avy amin'ny KMT mpanohitra, i Beijing. Niely ihany koa ny tsaho hoe nanantsofohan'i Beijing olona tany anatin'ireo mpilaza vaovao maro ao Taiwan. Tamin'ny fahitàna anio, ny mpamoaka lahatsoratra shinoa ato amin'ny Global Voices, Huang HungYu, dia nitafa tamin'i Summer Chen, lehiben'ny famoahana lahatsoratra ao amin'ny Taiwan Fact Check Center, mba hahafantarana hoe inona marina ireo tsaho miely ao Taiwan nandritra ny fifidianana ho filohampirenena natao ny Janoary 2020.
GV: Azonao atao ve ny manome fanamarihana momba ireo fanelezana fandisoambaovao nandritra ny fifidianana izay ho filohampirenena?
Summer Chen (SC): Talohan'ny Aogositra 2019, tsaho nifandraika tamin'ny olan'ny fahasalamàna ny ankamaroan'ireo niely. Teo anelanelan'ny Septambra sy Novambra 2019, nipoitra ireo fandisoambaovao mifandraika bebe kokoa amin'ny politika, isan'izany ny fandisoambaovao manodidina ny zon'ireo LGBT. Nohamarininay ihany koa ireo tantara vitsivitsy momba ireo hetsipanoherana tao Hong Kong nanoherana ny fanolorana olona voampanga. Tsikaritray fa eny anaty fampahalalambaovao ety anaty tambajotra sy ny efa mahazatra, nisy somary maromaro ihany ireo hafatra nampiasa ireo hetsipanoherana ny fanolorana olona voampanga tao Hong Kong ho famelezana ny antoko DPP mitondra amin'izao fotoana izao. Teo anelanelan'ny Septambra sy Novambra, 66 ireo tatitra fanamarinana navoakanay, ary 15 tamin'ireny no momba ireo hetsipanoherana ny fanolorana olona voampanga niseho tao Hong-Kong, sy ireo fifandraisana mandalo helodrano eo anelanelan'i Taiwan sy Shina. Teo anelanelan'ny Novambra 2019 sy Janoary 2020, nisy 14 ireo tatitra diso momba ny resaka fikarakaràna fifidianana mitanila. Taorian'ny fifidianana, nipongatra ihany koa ireo tsaho niampanga ireo manamboninahitra tany amin'ireo biraom-pifidianana ho nanao hosoka tamin'ny vatompifidianana.
GV: Nisy fiantraikany tamin'ny valim-pifidianana ve ireo tsaho niely?
SC: Andro vitsy monja talohan'ny fifidianana, nahita izahay tsaho momba ilay aretin-tratra ao Wuhan [antsona ankehitriny hoe COVID-19] niparitaka tao amin'ny Facebook. Nilaza izy io hoe efa nisy tranga voamarina tao Taiwan, ary nanainga ireo mpifidy mba hitondra sarombava rehefa hamonjy birao fifidianana. Voamarina fa vaovao diso izy iny tamin'izay fotoana izay. Tena ratsy tokoa ny fiantraikany satria afaka ny nanely horohoro . Betsaka tamin'ireo Taiwaney monina any amin'ny tanibe Shina no niverina nankao Taiwan mba hifidy [satria tsy mbola afaka natao ny nifidy avy lavitra], araka izany dia betsaka no mety resy lahatra tsy hamonjy birao fifidianana noho ny tahotra sao hifindran'ny aretina. Taorian'ny namoahana ny tatitra fanamarinana nataonay, namoaka fanambaràna niraisana ny ivontoeranay sy ny vondrona MyGoPen, iray hafa mpanamarina ny vaovao, nanoherana ny famoronana korontana sôsialy. Nandray fepetra ihany koa ny Facebook hampihenana ny isan'ny olona hiantefan'ireo lahatsoratra niresaka ny fiparitahan'ilay valanaretina vaovao tao Taiwan talohan'ny fifidianana.
GV: Heverinao ve fa ireo mpikirakira vaovao karamain'i Beijing no tao ambadiky ny fiparitahan'ireny tsaho mifandraika amin'ny fifidianana sy fandisoana vaovao tao Taiwan ireny?
SC: Tsy nahavita nikaroka izay tena niandohan'ireo tsaho ny ivontoeranay. Misy vitsivitsy ireo tsongo dia milaza fa mety tafiditra amin'izany i Beijing. Indraindray izahay mahita ny fampiasàna ny tarehintsoratra shinoa notsorina any anaty lahatsoratra any, ary mahatsinjo teny filamatra. Ny sasany amin'ireo tsaho momba ny hetsipanoherana ny fanolorana olona voampanga dia nivandravandra fa avy any Hong-Kong saingy naely tao Taiwan, kanefa tsy manana porofo mavesatra ho entina manamafy an'io izahay. Na avy aiza na avy aiza niaviany, tsy sitrakay ny hamela ireo tsaho hisy fiantraikany amin'ny fitondrantenan'ny olona manoloana ny fifidianana ao Taiwan. Raha ny hevitro manokana, zavatra kendren'ny ankamaroan'ireo tsaho ny hampizarazara ny fiarahamonina ao Taiwan. Amin'ny fandonana ny fihetsehampon'ny olona sy ny fanasamantsamahana ny fiarahamonina ho lasa ankolafy politika roa mpifanandrina: ny mpomba na tsy mpomba an'i Han Kuo-yu. Ny olona sasany mijery fotsiny ireo fandisoambaovao ho toy ny vazivazy ary mihomehy an'ireo olona manely tsaho. Kanefa, mila mametraka ity fanontaniana ity isika: nahoana ny olona no mbola manohy mizara tantara izay efa fantatr'izy ireo fa tsy hinoantsika akory? Ohatra, isaky ny avoaka ireo tatitra fanamarinana momba an'i Han Kuo-yu, misy olona hanomboka haneso ireo mpanohana an'i Han any anaty faritra fanehoana hevitra. Mety ho io no tena tanjon'ny fandisoana vaovao — ny hampizarazara ny vahoaka.
GV: Manana ohatra hafa ve ianao momba ny fomba fanapotehan'ny fandisoana vaovao ny fiarahamonina ao Taiwan?
SC: Taorian'ny fifidianana, nisy tsaho momba ny fanodinkodinana voka-pifidianana. Ohatra, lahatsary iray namboarina, noraketina avy any aminà birao fifidianana iray, nampiseho fa rehefa nanonona ny vokatra azon'i Han-Kuo-yu ilay manampahefana tao amin'ny birao fifidianana, nisy manampahefana iray hafa nanoratra izany ho any anaty firaketana ny azon'i Tsai Ing-wen [Ny anton'io raha ny marina dia eo am-panoratana ny vato voatonona teo aloha ilay manampahefana mpanisa vato, fa noho ny fomba nandraketana ilay lahatsary, dia toy ny hoe mampiahiahy tokoa ilay izy] Raha ny hevitro, novolavolain'i Beijing hampisamantsamahana ny fiarahamonina io tsaho io. Ao Taiwan, mbola ny KMT, antoko mpomba an'i Beijing, no maro mibahan-toerana any anatin'ireo mpikambana amin'ny governemanta ao an-toerana. Tsy ho afaka natao ny fanodinkodinana voka-pifidianana raha tsy niditra nanao izany ny KMT. Ankoatra izay, araka ny voalaza tamin'ireo fifidianana tany aloha tany, efa mba matotra ihany ny rafi-pifidianana ao Taiwan, ary nisy fitarainana tena matotra be natao momba ny fifidianana tany aloha tany. Taorian'ny fifidianana izay ho filohampirenena, tsy nangataka ny hamerenana ny fanisàna vato ny KMT na nametraka fanontaniana momba ny tsy fitanilàn'ireo vokatra. Araka izany, dia tena azo eritreretina ny hoe ireo mpikirakira vaovao nofanin'i Beijing no niketrika sy nanely ireny tsaho ireny.